Mandroaka ny haizina
"Mitsangàna, mihazavà fa tonga ny fahazavanao. Ary ny voninahitr 'i Jehôvah efa miposaka aminao. Fa indro, ny haizina manarona ny tany. Ary ny haizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah, ary aminao no isehoan'ny voninahiny" — Isa. 60:1,2.
Notendrena ho fitaovana hamirapiratan'ny fahazavan' Andriamanitra eo amin'ny fahamaizinana ara-panahy eto amin'izao tontolo izao ny fiangonana, ary hirotsaka ao am-pon'ny olona hanome fiadanana ny tara-pahazavan'ny Masoandron'ny fahamarinana. Isan'ny asa atao ao amin'ny tanimboalobok'Andriamanitra ny asa ataon'ny tena manokana atao amin'ny olona sy ny fianakaviana. Ny fahamoram-panahy, ny fahari-po, ny faharetana ary ny fitiavan'i Kristy dia tsy maintsy haseho amin'ireo tokantrano. Tsy maintsy mitsangana sy mazava ny fiangonana. Rehefa mamirapiratra avy amin'ny Fanahy sy ny herin'ny fahamarinana ny vahoakan'Andriamanitra, dia tsy maintsy mandeha mankany amin'izao tontolo izao rakotry ny haizina mba haneho ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra. Nanome herin-tsaina ambony ampiasaina ho voninahiny Andriamanitra; ilaina amin'ny fampiasana mavitrika ao amin'ny asa misionera izany herin-tsaina izany. Ho hita eo amin'ireo mpanompony ny fanatsarana sy ny fampivelarana amim-pahendrena ireo fanomezana nomen'Andriamanitra azy. Misy fitomboana isan'andro isan'andro ny fahalalana an'i Kristy.
Ilay niteny fahiny ary tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany, Ilay nitafy ny maha-olombelona, no mbola Ilay Mpampianatra lehibe. Rehefa manaraka ny dian-tongony ianao, mikatsaka ny very, dia hanatona ny anjely, ary noho ny fahazavana avy amin'ny Fanahin'Andriamanitra, dia hahazo fahalalana bebe kokoa ny amin'ny fomba tsara indrindra hanatanterahana ny asa nankininy hataon'ny tananao (...)
Ireo izay tokony ho fahazavan'izao tontolo izao dia nandefa tara-pahazavana, saingy malefaka sy mitsilopilopy. Inona no fahazavana? Toe-panahy araka an'Andriamanitra, fahatsaram-panahy, fahamarinana, famindrampo ary fitiavana; fanehoana ny fahamarinana eo amin'ny toetra sy fiainana izany. Ny filazantsara dia miankina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ananan'ny mpino manokana mba hampahery vaika azy, ary nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ny Zanany malalany ny zavatra rehetra, mba ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ny fanahy tsirairay avy. Tokony ho fahazavana mamiratra sy mazava ny fanahy tsirairay avy, haneho ny hatsaran'Ilay niantso antsika hiala tamin'ny haizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. — RH, 24 Martsa 1891.